Ukuphupha ngeOcker Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-Ocher ngumxube wezimbiwa zomhlaba, ezibandakanya udongwe olucekeceke nge-iron oxide, i-quartz kunye ne lime. Imibala yepeyinti isusela kwi-ocher etyheli kunye no-orenji ukuya kumbala omdaka nabomvu. IOcher yenye yezona zinto zindala ezisetyenziswa ngabantu. Sele abantu beLitye Age bebazisebenzisela ukupeyinta imiqolomba.
Eyona ndawo eyaziwa kakhulu ngemigodi ye-ocher ise-French Provence. Apha ungasandwendwela iikwari kunye namatye awenziwe ngendalo. Namhlanje, nangona kunjalo, i-ocher iveliswa ngokukodwa. Indlela ocher ebonakala ngayo kumaphupha ethu inokwahluka kakhulu, kuba umbala wayo wembala ubanzi kakhulu kwaye unokuyiphutha ngokulula ngombala omthubi, omdaka okanye obomvu. Kodwa ukuba uqinisekile ukuba uphuphe i-ocher, olu lwazi lulandelayo lunokukunceda utolike ngokuchanekileyo uphawu lwephupha.
1 Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, ayibalulekanga ukuba yeyiphi imibala yomthunzi esiphupha ngayo nge-ocher. Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso wephupha luphawu lwe uqhagamshelo lomhlaba lomntu uphuphayo. Oku kunokuthetha ukuba uqinisekile ngobomi kwaye amaxabiso akho alondolozekile.
Akukho meko apho oku kufanele ukuba kutolikwe ngokungalunganga, njengoko abo babebambelele engafanelekanga ukuba bangabonwa "njengabakudala" apha. Kwiphupha, igama elithethiweyo libalulekile, izithembiso zihlala zigcinwa kwaye nabani na ozibiza ngokuba ngumhlobo wakhe unokuthembela kukunyaniseka okungathintelwanga.
Ukukhawuleza kombala we-ocher kuphezulu kakhulu. Akunakubakho naziphi na ii-pigments ezigcina ukukhanya kwazo kuhlala ixesha elide njenge-ocher. Ukutolikwa kwamaphupha, lo mbandela ungasinika ulwazi ukuba umntu ophuphayo ngokwakhe akangomntu oguqukayo, kodwa endaweni yoko ixesha elide Yakha.
Ingakumbi kubudlelwane, le yinto ebaluleke kakhulu kuye ethi umntu ekubhekiswa kuye ayincamise kubaluleke kakhulu. Ngokombono wakhe, imicimbi yothando okanye ubusuku obunye ngokuqinisekileyo iyagwetyelwa. Nangona kunjalo, ngekhe aluqwalasele olu hlobo lobomi bobudlelwane eyedwa.
Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolikwa kwengqondo
Ukubona into kwi-ocher eqaqambileyo kukuchazwa kwengqondo kwephupha njenge ulonwabo jonga. Mhlawumbi kwimeko yamaphupha umntu uxakekile esenza okanye epeyinta into nge-ocher. Oku kunokuthetha ukufuna izimvo ezintsha kunye notshintsho kwi el mundo ngokwenene.
Nalapha ukuxhathisa kwe-ocher kubonisa ngokucacileyo. Ukugqithiselwa kubuntu bomntu ophuphayo, lo mbandela ubonakalisa ngokucacileyo ukuba uzimisele kwaye uzingisile kangakanani umntu ekubhekiswa kuye ukuba akwazi ukusebenza kwiinjongo zakhe.
Ukutolikwa kwephupha lezinto okanye umbala we-ocher, imifanekiso yamaphupha ebonakala ukongeza kwisimboli yephupha lokwenyani inokubaluleka kuhlalutyo lwephupha. Kungcono ubuyele kumava akho ephupha kwaye uzame ukukhumbula ezinye iinkcukacha.
Uphawu lwephupha «ocher» - ukutolika kokomoya
Kutoliko olugqithisileyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "ocher" lumele Isipho solwazi lomkhosi kodwa.